I-iPod yami ifile | Kusuka kuLinux
Yize le bhulogi inikezelwe ku- I-GNU / Linux (okungcono) futhi kuyisikhala lapho sizokhuluma khona ngezinye izinto, mayelana Ubuchwepheshe futhi "nokuningi okwengeziwe" ngezikhathi ezithile. Yilokho ibhulogi eyenzelwe, akunjalo?
Njengoba isihloko seposi sisho sithandwa sami I-iPod Nano 2G ngivele ngafa. Ngamthola enqotshiwe, ethule ekugcineni kwelinye lama-nightstand ami. Okokuqala ngacabanga ukuthi ayinacala, ngakho-ke ngayixhuma ku-PC. Ngixhume ikhebula elimhlophe alithanda kakhulu, ngaze ngamkitaza ngizama ukuqala kabusha (uma kungenzeka lishayisile) ngokhiye bemenyu nenkinobho yesikhungo, zombili zicindezelwe, kodwa cha, ayiqali, ayenzi lutho. Ilapho, ayinyakazi, namanje ... Wafa.
Ngisakhumbula isikhathi sokuqala enganginaso ezandleni zami. Akekho owangithengela, ngiwine phakathi umncintiswano abakwenzile ngaleso sikhathi (ngenkathi ngisasebenzisa iWindows XP) Umabhebhana nokuthi ngangiboshiwe nomhlanganyeli waseMexico.
Futhi selokhu sakhuluma iPod, Angiqondi ukuthi kungani Apple ayikhiphi uhlobo lwe iTunes ukuze I-GNU / Linux. Ngicabanga ukuthi bazoba nezinzuzo ezingaphezulu ekugcineni. Abasebenzisi abaningi be Linux banayo a iPod noma a iPhone, yize nge I-Samsung Galaxy SII con Android manje emakethe, angazi. Nokho, angiqondi ukuthi kungani ingekho inguqulo ye- iTunes (noma ngabe ivaliwe kunjalo) ukuze I-GNU / Linux.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-iPod yami ifile
Uke wazama i-aTunes noma i-gtkpod?
Indoda uma kungenjalo ngokuswela ezinye izindlela. Lapho i-iPod yami isaphila ngangisebenzisa iRhythmbox ukuyiphatha. IBanshee nayo iyasebenza, njengoba usho iGtkPod, Hiccup, aTunes neSongbird ..
Kepha angiqondi ukuthi kungani i-Apple ingenayo inguqulo ye-iTunes yabasebenzisi be-Linux.
Ilula kakhulu, ukuze ukwazi ukuthenga iMac. Uzongitshela Yini nge-W $? Yebo, kepha lokho akuhlangene nakancane nakho, ama-Mac angcono kakhulu
Empeleni uma ucabanga ngakho i-Apple ingenza izigidi ezimbalwa ngaphezulu uma zifaka abasebenzisi beLinux. Khohlwa i-Hardware ne-Software yakho umzuzwana bese ugxila ku-iTunes + Music Store. Umsebenzisi (noma yiluphi uhlelo abalusebenzisayo) olunokufinyelela ku-iTunes uzokwazi ukuthenga umculo esitolo sakhe sedijithali. Ngaphezu kwalokho, yize kuzodingeka ubone izibalo, ngiyaqiniseka ukuthi lokhu kungenye yemithombo eyinhloko yemali engenayo ye-Apple.
Ungathenga ku-Music Store yakho ukwazi ukufaka noma iyiphi iklayenti le-p2p? Mina uqobo ngithanda ukuthenga ama-CD woqobo, kepha angokwenyama, akhokhela okuthile okungekhona okwenyama futhi akwazi ukulanda ngathi angikuqondi
Thenga i-android ne-voila, inemisebenzi eminingi, inethezekile futhi ishibhile kune-ipod / iphone elinganiselwe
Yebo kunjalo, uma bengingakwenza .. 🙁
Unazo ngo- € 75, kukhona amaphilisi aleyo ntengo
Angithengi i-iPod kuLinux futhi, okungenani kuze kube ngithola ukusekelwa okuhle. Ngokwami, angithandi ukuncika kumathuluzi afana ne-itunes, futhi i-tuna noma i-gtkpod ayisebenzi kahle. Ukuhlela ividiyo yami ye-ipod kungenzeka ngeRhythmbox, kepha iShuffle angikwazi.
Uma udinga ukubuyisela i-iPod ku-Linux, iba yiphupho elibi langempela. Angisakwenzi ngama-iPod.
Ngikwazile ukudidizela u- $ huffle, kepha kuze kufike lapho kungafanele khona ngiyavuma, kuningi kwe-Mp3 / Mp4 emakethe eyenza insizakalo efanayo kokuncane kakhulu
Yebo, abaphathi abaneBanshee abalahlekelwa. Kuhle, kepha ngizokhuluma ngalokho kokuthunyelwe. Inkinga ukuthi uma bengingakhetha umdlali ngiwuthenge (engingakwazi), zingaki ezinye izindlela ezikhona ezinekhwalithi (ikakhulukazi yomculo) ye-iPod? Yikuphi ukwahluka nge-Android ngokwesibonelo?
Umehluko wekhwalithi yomsindo awuwona owesabekayo, umuntu ukutshela ukuthi ngaphandle kobunzima uhlukanisa umsuka wesigingci, kungani ungakwenzi lokho? I-LOL
LOL !!! Manje ukukhombisa ukuthi imisindo ehluke kanjani leyo? Ake sibone ... uyayikhumbula iGoogle Doodle yesigingci? … Yisiphi isigingci esasizobonwa? LOL !!!
Kuyiqiniso, angicabangi ukuthi i-iPod iyi-panacea yomculo, intengo yokuningi icacile, futhi kungani uyithenga? Uma uma uthenga okuthile ku-apula ngosuku olulandelayo bakhipha uhlobo olusha bese endala kungasekho ukwesekwa. Ngalokho ngiya kwiMedia Markt noma iFnac ngiyothenga iM Mp4 yokuqala ngo- € 25 engiyibonayo esikhundleni sokuthenga i-iPod Touch ebiza ngaphezulu kwe- € 200 uma ingqikithi izokwenza insizakalo efanayo, futhi ngaphandle kokufaka izinhlelo
Angiyizwanga leyongoma oyishoyo, futhi ngithi ngihlukanisa indawo yemvelaphi, kepha hhayi njalo amamodeli wabahle
I-Dx Wine, noma ukuthi ungayifaka kanjani iDirectX usebenzisa iwayini